4K ကိုမီးမောင်းထိုးပြ - Rohde & Schwarz NAB 2015 တွင်၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းအစုစုကိုမြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်အဆင့်သို့အပ်နှံခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 4K အပေါ်မီးမောင်းထိုး - Rohde & Schwarz ဟာ high-resolution စံဖို့ NAB 2015 မှာယင်း၏ထုတ်ကုန် Portfolio ခွငျး
မြူးနစ် - Rohde & Schwarz ရှည်လျားသောထုတ်ကုန်များ၏၎င်း၏အကွာအဝေးနှင့်အတူ 4K ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို format ကိုထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Las Vegas မှာ NAB 2015 မှာကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ R & S ကဗင်းနစ်ကိုစားသုံးမိခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု server ကိုနှင့်အတူဤပုံစံအဘို့အသေးသည်အခြားလျှောက်လွှာတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တိုက်ရိုက်လွှဆန္ဒပြပွဲများတွင်, Rohde & Schwarz ထို့အပြင်က transmitter ၎င်း၏လက်ရှိမျိုးဆက်သိသိသာသာနိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်နိုင်ပုံကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ Plus အား, ထို DOCSIS 3.1 ဘရော့ဘန်းစံများအတွက် devices များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် T-& M ကထုတ်ကုန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါထုတ်လွှင့်ထံမှဖြေရှင်းချက်နှင့်မီဒီယာအထူးကုတောင်ပိုင်းအောက်ပိုင်းခန်းမထဲမှာတဲ SL1105 မှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည်။
အတူကနဦး 4K transmission ကို Rohde & Schwarz
Rohde & Schwarz 4K စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့ post ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, စားသုံးမိ, သိမ်းဆည်းခြင်း, ပလေးအောက်, encoding ကနှင့် multiplexing အဖြစ်က transmitter နဲ့ T & M ကတူရိယာအဘို့အဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်ထုတ်ကုန်များ၏င်း၏ပြည့်စုံသောအကွာအဝေးနှင့်အတူ High-resolution ကို 4K transmission ကိုထောက်ခံပါတယ်။ 2014 ခုနှစ်, Rohde & Schwarz အများအပြား 4K transmission ကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလမှာတော့တစ် R & S မှ AVHE100 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအန်ကုဒ်မှတဆင့် Linkin Park ဖျော်ဖြေပွဲ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ UHD ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းဒေတာချုံ့၏စောင့်ရှောက်မှုယူ ဂြိုဟ်တု ဘာလင်ကနေ - ကမ္ဘာ premiere ။
Rohde & Schwarz DVS ထံမှ 4K အကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန် - ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွဲ - ပြီးသား 2005 ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ကြပြီ။ ယခုနှစ်ရဲ့ NAB မှာ, Rohde & Schwarz R & S ကဗင်းနစ်ကိုစားသုံးမိခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆာဗာ၏တစ်ဦးတိုးမြှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာ preview ကိုအဖြစ်တင်ဆက် R & S ကဗင်းနစ် 4K server ကို, အထူးသ 4K စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ကြီးမားတဲ့ data တွေကို volumes ကို၏လွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့
Rohde & Schwarz သရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုအပါအဝင်ပြည့်စုံအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါမာစတာပုံစံ (IMF က) လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုတင်ပြဖို့အတွက် R & S မှ CLIPSTER mastering ဘူတာရုံကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ IMF ကအသုံးပြုသူများကဘာသာပေါင်းစုံဗားရှင်း၏လက်ရှိ labyrinth ထဲကတစ်ခုအလွန်အဆင်ပြေလမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆန်းသစ်, အရွယ်မှာ R & S မှ SpycerBox ဆဲလ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းတိုးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် function တစ်ခုထူးခြားသောပေါင်းစပ် - ဒါဟာယခုတစ်ခုတည်းအမြင့်ယူနစ်အတွက် 60 Tbyte သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။
ထိရောက် transmitter ကိုဖြေရှင်းချက်
Rohde & Schwarz ထို့အပြင် NAB မှာက transmitter ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ပြသပါလိမ့်မယ်။ R & S မှ Tx9 transmitter ကိုမျိုးဆက်ရေရှည်တည်တံ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ ATSC စံတက်သည် 50 ဖို့ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အက transmitter သိသိသာသာနိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏တဲမှာတိုက်ရိုက်ဆန္ဒပြပွဲများတွင်, Rohde & Schwarz သူတို့လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များလျော့နည်းကျဆင်းခြင်းနှင့် 70 ရာခိုင်နှုန်းတက်၏ငွေစုအောင်မြင်ရန်ကူညီကိုဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့၏ကန့်သတ်မှာစမ်းသပ်ခြင်း DOCSIS 3.1 ဘရော့ဘန်း devices များ
စားသုံးသူအိမ်ထောင်စုသို့ 4K UHD အကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်ရန်, ထိုကဲ့သို့သော DOCSIS 3.1 စံအဖြစ်အသစ်သောနည်းပညာများကိုလိုအပ်သည်။ Rohde & Schwarz ဒီစံနှုန်းနှင့်အတူလိုက်နာကွန်ယက်ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၎င်း၏ R & S မှ CLGD cable ကိုဝန်မီးစက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ R & S မှ FSW signal ကိုနှင့်ရောင်စဉ် Analyzer နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခုနှစ်, R & S မှ CLGD ညာပိုင်းနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအတွက်အချက်ပြမှုများကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Rohde & Schwarz တောင်ပိုင်းအောက်ပိုင်းခန်းမထဲမှာတဲ SL1105 မှာယင်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဥရောပ (ဌာနချုပ်): Patrizia Muehlbauer, ဖုန်း: + 49 89 4129 13818, E-mail ကို: [အီးမေးလျ protected]
မြောက်အမေရိက: Pam Sanders, ဖုန်း: + 1 410 910 7908, E-mail ကို: [အီးမေးလျ protected]
အာရှပစိဖိတ်: ဝမ်ရှီ Tong, ဖုန်း: + 656307-0029, E-mail ကို: [အီးမေးလျ protected]
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးဥရောပ, အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်း: + 49 89 4129 12345
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုမြောက်အမေရိက: + 1 888 စမ်းသပ်ခြင်း RSA (+ 1 888 837 87 72)
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုလက်တင်အမေရိက: + 1 410 910 79 88
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအာရှပစိဖိတ်: + 65 65 13 04 88
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုတရုတ်: + 86 800 810 8228 သို့မဟုတ် + 86 400 650 5896
စမ်းသပ်မှုများနှင့်တိုင်းတာခြင်း, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မီဒီယာ, လုံခြုံဆက်သွယ်ရေး, ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး, radiomonitoring နှင့် radiolocation: အဆိုပါ Rohde & Schwarz အီလက်ထရွန်းနစ်အုပ်စုတစ်စုကိုအောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ 80 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ပိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒီလွတ်လပ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကျယ်ပြန့်အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်ကိုရှိပြီး 70 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအီလက်ထရွန်းနစ်အုပ်စုတစ်စုက၎င်း၏ထူထောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာခေါင်းဆောင်များကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဇွန်လတွင် 30, 2014, Rohde & Schwarz ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 9800 န်ထမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ (ဇွန်မှဇူလိုင်လ) က 1.75 / 2013 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် EUR 2014 ဘီလီယံတစ်ဦးအသားတင်ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမြူးနစ်, ဂျာမနီအခြေစိုက်သည်။ ဒါဟာအစ, ဤဒေသများအတွက်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရန်, စင်ကာပူနှင့်ကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်, မေရီလန်းပြည်နယ်, အမေရိကန်ရှိပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ဓာတ်ပုံများအပါအဝင်အားလုံးစာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များ, မှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်ပါ www.press.rohde-schwarz.com
4K 4K စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိရောက် transmitter ဖြေရှင်းချက် NAB 2015 post ကိုထုတ်လုပ်မှု R & S မှ AVHE100 Rohde & Schwarz ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-03-31
ယခင်: Myers PBS TechCon 2015 အဘို့အစီစဉ်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဘို့ Turnkey Solutions ဝေငှရန် JR မီဒီယာနှင့်အတူ 2G ဒစ်ဂျစ်တယ်အပေါင်းအဖေါ်များ